London Ku Amsterdam NaEmodostar Chitima Kubva € 40 | Save A Train
musha > Train Travel Holland > London Ku Amsterdam NaEmodostar Chitima Kubva € 40
London Ku Amsterdam NaEmodostar Chitima Kubva € 40
Chitima kufamba Britain, Train Travel Holland
(Last Updated On: 14/05/2020)
Chimwe chezvinhu dzakakurumbira zvinoita kuti kufamba mu Europe inobva kuLondon kuna Amsterdam, kukurumidza rwendo pamwe pamusoro 4 miriyoni vakatakurwa kuita kudii nerimwe gore. Sarudzo yepamusoro yekufambisa ndeyechitima kuburikidza neEurostar, mukuru-nokukurumidza njanji unobva misoro miviri European. This nzira, iyo yakavhurwa 2018, chinoramba chakanaka kusarudza kuti avo vachitsvaka kuponesa mari uye kunakidzwa nyore kuti njanji pakufamba anopa.
pazasi, iwe unogona kuwana ese iwo madanho auchazoda kuti akubatsire kutungamira yako London kuenda kuAmsterdam Eurostar rwendo.
Nyaya iyi yakanyorwa kudzidzisa vatengi vanenge nechitima kufamba uye akasikwa Save A Train, Iwo Akachipa Kwazvo Chitiketi Matikiti Webhusaiti Munyika.
Eurostar Train Times From London To Amsterdam
The Eurostar anomhanya kazhinji, pamwe kusvikira 16 kusimuka pazuva zvichienderana mazororo uye kwevhiki. Chitima chekutanga kubva kuLondon kuenda kuAmsterdam mune chero zuva chinobuda muLondon St. Pancras pa 07:16 uye anotora dzinokwana 3 maawa uye 55 maminitsi, Pavakasvika kupinda Amsterdam Central pa 12:11 (Amsterdam Centraal ndiro zita yechiDutch kuna Amsterdam Central Station). Izvi Kazhinji mumwe yakachipa pashiri matikiti iripo, saka kana iwe hausati averse kuti ndichifumira mangwanani unogona kuponesa mari uye musoro panguva mambakwedza.
Route nguva dziri anenge nokusingaperi awa, izvo mashizha iwe zvakawanda zvokusarudza kuenda nguva. The wokupedzisira chitima usiku paunobuda pa 17:16 uye anosvika 22:11, iyo inongova nguva yakakwana kunakidzwa pousiku tudyo ari Dutch guru. Check yedu yepaIndaneti paunogona kuwana bhatani kodzero chidzitiro kana chete tinya SaveATrain.com, yeLondon yakazara kusvika kuAmsterdam Eurostar nguva.
London kuenda kuBrussels Chitengo chemitengo
London kuenda kuParis Chitima mitengo
Geneva kuenda kuLondon Chitima mitengo
London kuenda kuAmsterdam Mutengo wemitengo
Mugshot Ticket Your On The Eurostar
Wese matikiti eEroostar matikiti anosanganisira kanenge kaviri zvimedu zve mukwende uye bhegi ruoko. Kana uri parwendo zvikuru yakawanda mukwende, unogona vasarudze tikiti unokubvumira munowedzera zvinhu. Nepo bhajeti vendege vanogona akamurairawo zvishoma nokuda kwavo kutanga bookings, bhegi mari yechikoro uye chigaro yakasarurwa mhosva nokukurumidza wedzera kukwira, izvo zvinoreva iwe anopedzisira kubhadhara zvimwe rose mugove zvishoma.
Mitengo yematikiti eiyi London kuenda kuAmsterdam Eurostar rwendo runochinja zvakanyanya, saka isu dzinorumbidza kutenga matikiti mangoti unokwanisa. kazhinji kutaura, matikiti izvi kuenda Sale mitatu pachine, kunyange iri nguva unogona kuwana navo mwedzi mitanhatu isati zuva rako okufamba. Tinoratidza kushandisa yedu Save A Train nyika chitima matikiti Website kuwana uye bhuku rako chitima matikiti, iyo yaibva unonzvera zvose iripo uwandu kuti imi mutengo mutengo zvinobvira, avimbiswa.
Amsterdam kuenda kuLondon Chitima mitengo
Rotterdam kuenda kuLondon Chitima mitengo
Paris kuenda kuLondon Chitima mitengo
Brussels kuenda kuLondon Chitima mitengo
Mitengo Uye Mhando dzeTikitikiti PaLondon KuAmsterdam NaEcyostar Chitima
The Eurostar chitima unoshanda-kirasi matatu cabins zvichienderana bhajeti yenyu. Nokuti avo kungotsvaka kuti panzvimbo imwe neimwe, wechipiri matikiti kirasi vari zvaunogona nezvechisarudzo. Vaya bhizimisi kufamba anogona pachinzvimbo vanosarudza Standard Premier kana Business Premier tikiti, zvose hunoita kuti kugara yomuzana mukirasi Coaches zvekudya panguva rwendo rwenyu.
Sezvo taona anotaurwa pamberi, Pricing kunoenderana dzenyu mazuva okufambisa, saka unoda kubhuka tikiti rako rechitima nekukurumidza kana kuwanikwa kuchizotanga. If you book far enough in advance, unenge uchitsvaga kuripira pamusoro 92 Dollars kumativi-rwendo, kana pamusoro 46 madhora imwe-nzira. Waiting kusvikira yapera kutyaira mitengo denga-soro, pamwe mari zvinenge doubling zvapedzisira ukatenga tikiti yako.
Yeuka kuti kubvira May mberi, rakananga chitima kubva Amsterdam Central Station kuLondon St. Pancras ichatanga uchishandisa, izvo achaponesa iwe akawanda maawa nguva kufamba kwako kudzoka parwendo. Uyewo kutanga muri yakananga mabasa reRotterdam. mabasa aya achava isingadhuri pane ano Pricing.
Fare Type Amenities kurambidzwa
2 zvimedu bhegi mukwende uye mumwe ruoko kwaisanganisira
Seat yakasarurwa iripo pashure Réservation
Zvokudya iripo kuti kutengwa
Non-refundable. Asati chitima kuenda, unogona kutsinhanisa tikiti renyu. A changed muripo weUS 40 Euro uye yokufamba musiyano rinoshanda. Kana tikiti itsva hazvichadhuri kupfuura tikiti yepakutanga, mutengo musiyano haangavi refunded.
Upgraded zvigaro iine zvakawanda legroom uye shoma ruzivo
A chiedza kudya uye kunwa zvichabviswa vakashumira panguva chigaro chako
Non-refundable. Asati chitima kuenda, unogona kutsinhanisa tikiti renyu. A changed muripo weUS 50 Euro uye yokufamba musiyano rinoshanda. Kana tikiti itsva hazvichadhuri kupfuura tikiti yepakutanga, mutengo musiyano haangavi refunded.
3 zvimedu bhegi mukwende uye mumwe ruoko kwaisanganisira
Chef-akagadzirirwa zvokudya uye Champagne zvichabviswa vakashumira panguva chigaro chako
Access kuti bedzi Lounge pamberi yekubva
Taxi Réservation rubatsiro
Free cancellations uye mapfumo exchanges kusvikira 60 Mazuva rokubuda pamusoro nzira dzose pakati UK, France uye Belgium.
Free cancellations uye mapfumo exchanges kusvikira kuenda pamusoro rakananga nzira pakati UK uye Netherlands, ndinoiitawo vakasununguka exchanges pamusoro kunanga nzira (Thalys / Eurostar Via kweBrussels) kusvikira kuenda.
It kusvetuka kuti Eurostar haasi kuwanikwa nevaya kuchengeta njanji zvichipfuura, saka kana uchida kuti rwendo urwu chinhu vanonyengera oornag, kutenga rako chitima tikiti pachine. Unogona kuwana nezvitima matikiti paIndaneti pane Websites siyana, kunyangwe iwo mawebhusaiti anoratidza kukwira mitengo yezvitima zveEurostar zvichienzaniswa Save A Train Website.
Kamwe ari muguta guru, unogona batanidza mberi vachishandisa inoverengeka yakasiyana Amsterdam nezvitima. Masheji ekumhanya-mhanya anomhanyisa anopiwawo kune dzinoverengeka nzvimbo munzvimbo dzekondinendi.
Bremen kuenda kuAmsterdam Chitengo chemitengo
Hannover to Amsterdam Chitengo chemitengo
Bielefeld kuenda kuAmsterdam Mutengo wemitengo
Hamburg to Amsterdam Mutengo wemitengo
Pabhodhi Iyo Eurostar Chitima Kubva kuLondon KuAmsterdamn
kamwe onboard, iyo yakazara yekufambisa nguva kubva kuLondon kuenda kuAmsterdam nechitima inenge 3 maawa uye 52 maminitsi. Pamwe wako pre-kuenda kusvika, rwendo nguva yako yose ichava kumativi 4.5 maawa.
The chitima pacharo inobudisa mureza zvigaro uyewo tafura inokubvumirai basa uye kudya zvakanaka. Iyi inowanzobuda bhuku mangwanani, Zvisinei, saka iva nechokwadi kuti kunonga pachine kana kuti ungave chii kufanana. Pasinei apo ugere, zvauri anosimbiswa kuva legroom zvakanaka uye plugs akamurairawo mano ako.
Sezvambotaurwa, pane vakasununguka WiFi onboard, saka unogona kuramba nomwoyo Email wako nemagariro nevezvenhau zvinodiwa. Zvichienderana tikiti renyu, unogona musoro murairidzi dzokudyira, apo unogona kuwana chikafu, zvinwiwa uye nezvikafu zvishoma. Kana uri vagere wokutanga-kirasi kabhini, zvokudya vachaitwa zvakananga chigaro chako.
Patakasvika, hapana chikonzero kuenda kuburikidza pasipoti kudzora, kunyange pashure Brexit uye kubviswa UK kubva EU mabasa aya anogona kushandura. Iva nechokwadi kuti aone mitemo yemunyika usati tatanga rwendo rwenyu.
London kuenda kuAntwerp Chitengo chemitengo
London kune Lille Chitima mitengo
Strasbourg kuenda kuLondon Chitima mitengo
London kuenda kuRotterdam Chitoro chemitengo
Sei Travel Europe By Train?
Ehe saizvozvo, mubvunzo chaiwo Ndokusaka chaizvo Europe yakanakisisa noruzivo Via chitima kufamba – shure kwezvose, ichi kondinendi zvakanaka-kubatana zviri nyore traversable nendege, motokari, kana bhazi. zvisinei, pane zvinhu zvishoma sezvo uchidanana sezvo mhuka girl kunze hwindo yako muchitima kukwira, uye wokutanga-nguva vafambi hakuna anenge hapana yamunenge pane hopping mungarava chitima chete usati anoendazve. Izvi zvakasiyana chaizvo muEurope dzendege, apo yemhando Check-munguva zvinopfuura mumaawa maviri uye yaunopedzera mamwe nguva uye mari pakufamba kuenda kwaaishanda kuna yendege nzvimbo.
Achitaura nguva kufamba, Europe iri raizivikanwa yakakwirira-nokukurumidza njanji, izvo kure outstrip kwayo ichitenderera motorways. Zvitima rose kondinendi anokurumidza uye kazhinji zvakananga, izvo zvinoreva shoma nguva pakufamba kuenda kwaaishanda uye nenguva yakawanda kuongorora.
Chitima dzemapurisa vane kubatsira vari zvakanaka iri sezvo kazhinji vakavaka mukati meguta centre. Kunowanzosanganisira zvinopa vakawanda kuenda nguva pazuva iri zviuru pakutengeserana, izvo zvinoreva kuti uchaita nguva dzose nezvechisarudzo yokufamba.
pakupedzisira, chitima matikiti vanonyanya zvichibatanidzwa, Kubvumira kuti vauye mukwende uye sarudza zvigaro zvenyu pasina kubhadhara chikuru zvikuru chiri okuwedzera mari.
Zvose izvi kuti, apo Europe ane nzira dzakawanda kuti vafambi, hapana anorova chakanaka yekare chitima rwendo.
Frankfurt kuenda kuLondon mitengo yezvitima
Munich kuenda kuLondon Chitima mitengo
Moutiers kuenda kuLondon Chitima mitengo
Marseilles kuenda kuLondon Chitima mitengo
Tiketi zveBhuku Tete neChengetedza Chitima Chako London KuAmsterdam neTreni
Search Nzvimbo yedu bhuku matikiti vose Europe yepamwoyo dzokugara, kusanganisira Bherujiyamu, Itari, Siwizarendi uye UK (inosanganisira chitima kubva kuLondon kuenda kuAmsterdam neEurostar). kutsvaka kwedu injini yakagadzirirwa Chengetedza mari pamusoro matikiti zvose uye zvinosanganisira pasina Réservation yechikoro. Tinoita izvozvo nyore kuti kutenga nokubvuma akawanda nzira mubhadharo, kusanganisira kadhi, Giropay, Ideal uye zvakawanda.
saka, chero chikonzero chako yokufamba, kana uri kufamba oga kana nevamwe, tora maminetsi mashoma kutsvaga matiketi echitima paSave Chitima, iyo inopa rakadzika mitengo, avimbiswa.
Kutarira Kuti bhuku? tora 3 maminitsi uye kuwana tikiti renyu London kuna Amsterdam chitima atasve ari www.saveatrain.com . Zadza zuva uye nguva kuti zvaungada kufamba, uye isu achakupa yakanaka mutengo yerwendo.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo? Click pano: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/london-amsterdam-direct-train/ - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kuchinja / kes kuti / of kana / nayo uye mimwe mitauro.
#stpancras amsterdamcentraal europeantravel London longtrainjourneys Train Travel travelamsterdam travelengland
Carissa chinhu farira mufambi uye munyori anoita achirarama nokuunza zvakanakisisa yokutenda akaenderei vaverengi vake. Atova akagogodza pamusoro 40 Nyika kure naye bucketlist saka kure uye asina chinangwa kwekumira. Pasinei sipping kofi muna Napoli kana vachipemberera Harry Potter muna Edinburgh, iye nguva dzose chaizvo kusangana nevanhu vatsva uye kuona zvinhu zvitsva. - Unogona baya pano ndibate
10 Events Most Special In The Netherlands
5 Best National Holidays In Europe To Kambani
Chitima kufamba Britain, Chitima kufamba France, Chitima kufamba Italy, Chitima kufamba Sweden, Chitima kufamba Switzerland, Chitima kufamba UK, Travel Europe
Chii The inoita Mode Of Travel In Europe?
Chitima pakufamba Belgium, Chitima kufamba France, Chitima kufamba Germany, Train Travel Holland, Train Travel The Netherlands, Chitima kufamba UK, Travel Europe
6 Savvy Matipi Kuronga A Boka Rwendo Pane Budget